अन्तरास्ट्रिय || Radio Dhading
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप निरन्तर छ : प्रा डा. बराल
जेठ २, रेडियो धादिङ - भारतका लागि नेपाली राजदुत समेत रहिसकेका प्रा डा. लोकराज बरालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा सधै जस्तो भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना
बंगलादेशमा समलिंगी सम्बन्धी पत्रिकाका सम्पादकको हत्या ।
रेडियो धादिङ, धादिङ बैशाख १४ । बंगलादेशमा एक पत्रकारको हत्या भएको छ । समलिंगी सम्बन्धी बंगलादेशको पहिलो पत्रिका रुपबानका वरिष्ठ सम्पादक जुलहास मन्नानको धारिलो हतियारले हानेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणकारीले ढाकामा रहेको पत्रकार
भातरको ओडिशामा बस पल्टिँदा २५ जनाको मृत्यु ।
रेडियो धादिङ, धादिङ बैशाख ०६ । भारतको ओडिशामा बस पल्टिँदा २५ जनाको ज्यान गएको छ । ११ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ओडिशाको बरगाढ रेमताबाट देवगढका लागि छुटेको बस तिलेबानी गेलोहाटमा दुर्घटनामा परेको स्थानीय प्रहरीले
रेडियो धादिङ, धादिङ वैशाख ०४ । जापानमा शुक्रबार राति गएको ७ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान जानेको संख्या ११ पुगेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति ९ बजेर
इजिप्टमा आइएसको आक्रमणमा परि १३ प्रहरीको मृत्यु ।
रेडियो धादिङ, धादिङ चैत्र ८ इजिप्टमा बिद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसको आक्रमणमा परि १३ जना प्रहरीको ज्यान गएको छ । इजिप्टको द्वन्द्वग्रस्त सिनाई प्रायदिपमा आइएसले गरेको मोटार आक्रमणमा परि प्रहरीको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्
स्पेनमा विदेशी विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु ।
रेडियो धादिङ, धादिङ चैत ८ स्पेनमा विदेशी विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जनाको ज्यान गएको छ । बार्सिलोना र भ्यालेन्सियाको बिचमा पर्ने मोटरबाटोमा बस दुर्घटना भएको हो । बसमा ५७ जना विद्यार्थी रहेको र
अरब लिगद्वारा हेजबुल्लाह आतंककारी घोषित ।
रेडियो धादिङ, धादिङ फागुन २९ गते । अरब लिगले लेबनानमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको शिया मुस्लिम संगठन हेजबुल्लाहलाई आतंककारी घोषित गरेको छ । सुन्नी मस्लिम देशको बाहुल्यता रहेको अरब लिगले हेजबुल्लाहलाई आतंककारी घोषित गरेको हो । यसअघि
सुडानका लडाकुलाई तलबको सट्टा बलात्कार गर्ने छुट !
रेडियो धादिङ, धादिङ फागुन २९ गते । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार दक्षिणी सुडानमा सेनासँग जोडिएका लडाकुलाई तलबको सट्टा महिलालाई बलात्कार गर्ने स्वीकृति दिने गरेको खुलासा भएको छ । बिद्रोहीसँग लड्नका लागि सेनालाई सहयोग गर्ने लडाकुलाई
उत्तर कोरियाद्वारा दुई ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण ।
रेडियो धादिङ, धादिङ फागुन २७ उत्तर कोरियाले दुई वटा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ । उत्तर कोरियाले छोटो दूरीमा मार हान्न सक्ने दुई वटा मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले जनाएको छ । उत्तरले ती
टर्कीलाई इराकको ४८ घण्टे अल्टिमेटम
रेडियो धादिङ, धादिङ मंसिर २१ । इराकले मोसुल शहरमा रहेका सेना फिर्ता लैजान टर्कीलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । ४८ घण्टा भित्र उत्तरी शहर मोसुलमा रहेका सेना टर्कीले फिर्ता नलगे टर्की विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने
आगोसँग नखेल्न रुसलाई टर्कीको चेतावनी ।
रेडियो धादिङ धादिङ, मंसिर १२। रुससँग सबन्ध बिग्रदै गएपछि टर्कीले पनि रुसलाई आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रिसव टायिप एर्डोगानले रुसी विमान खसालेको विषयमा आगोसँग नखेल्न रुसलाई चेतावनी दिनुभएको हो
पेरिसमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार र विस्फोट,एक सयकाे मृत्यु ।
कात्तिक २८, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको गोली प्रहार र विस्फोटमा परी कम्तिमा एक सयको मत्यु भएको छ । घटना लगतै फ्रास्सले राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा गरेको छ । सबै सीमाहरु बन्द गरिएको छ भने मानिसहरुलाई घर बाहिर ननिस्कन
अफगानिस्तानमा ७ दशमलव ७ रेक्टर स्केलकोशक्तिशाली भूकम्प !
कात्तिक ९ - अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । ७ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु राजधानी काबुलबाट २ सय ६५ किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्छ । जुन पाकिस्तानको सीमा नजिकै हो । भूकम्पको झड्का भारत,
राष्ट्रपतिको हत्या योजना बनाएको भन्दै उपराष्ट्रपति पक्राउ
कात्तिक ७ – माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपराष्ट्रपति अदिबलाई राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूमको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोपमा पक्राउ गरेकोे माल्दिभ्सका गृहमन्त्री उमर नसिरले जानकारी दिनुभएको छ । उपराष्ट्रपति
बेलायती सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना !
असोज २५ अफगानिस्तानमा बेलायती सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । पुमा एम के २ सैन्य हेलिकप्टर अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नजिकै रहेको नेटोको प्रशिक्षणस्थलमा
संयुक्त राष्ट्र संघको ७० औं महासभा आजदेखि सुरु ।
भाद्र २९ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७० औं महासभा आज सुरु हुँदैछ । महासभामा छलफलका लागि तयार पारिएको संगठन सुधारसम्बन्धी दस्तावेजको सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्रस्तावित दस्तावेजमा सुरक्षा परिषदको सदस्य वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई
सेनाको कारबाहीमा ९४ तालिवान मारिए ।
काबुल भाद्र २५ गते ! अफगानिस्तानका विभिन्न भू–भागमा त्याहाका राष्ट्रिय सेनाको सञ्जालले गत दुई दिनभित्र गरेको विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीमा ९४ जना विद्रोही मारिएको जनाइएको छ । सोही अवधिका छुट्टाछुट्टै ती आक्रमणहरुमा परी १२ जना सेनाले पनि ज्यान